Mampiavaka ny soavaly palomino | Soavaly Noti
El soavaly palomino Izy io dia biby manana loko palitao manaitra, fotsy sy fotsy. Raha manana iray ianao na mieritreritra ny hahazo azy io ary liana ny hahafantatra ny antony mahatonga an'io, dia tsy azonao adino izay holazaiko anao manaraka.
Discover inona ny toetra mampiavaka azy izay mahatonga an'ity Equine ity ho tena manokana sy tiana.
2 Tahaka ny inona ilay soavaly palomino?
3 Fa inona izany?
4 Inona no maha samy hafa ny soavaly palomino sy ny perla?
Sary - Equisens.es
Ilay soavaly palomino, antsoina hoe Elizabethan any Espana noho ny Mpanjakavavy Elizabeth II izay nandrisika ny fitomboany, avy any Amerika Avaratra, manokana any Etazonia misy ny Fikambanan'ny Soavaly Palomino Amerikanina tamin'ny 1936, izay tompon'andraikitra amin'ny fisoratana anarana ireo santionany manana an'io palitao io raha toa ka efa voasoratra anarana ho karazana amin'ny fikambanana hafa.
Tahaka ny inona ilay soavaly palomino?
Ny soavaly palomino dia iray amin'izany manana palitao ocher volamena misy volafotsy fotsy sy volony fotsy. Ny voalohany dia lova avy amin'ny soavaly espaniola, raha ny lokon'ny mony sy ny rambony dia mampiavaka ny karazany amerikana.
Inona no ataon'io loko io? Ny génétique, indrindra ny gème crème, izay manjaka tanteraka, izay midika fa rehefa misy allele tokana dia miteraka fanjavonan'ny 50% amin'ny pigment mena. Arak'izany, somary voahitsaka ny sosona chestnut ary mihombo ny lokon'ny ocher volamena izay tianay.
Biby manana vatana hozatra, matevina be ary manana tanjaka be. Fohy matetika ny tendany, ary matanjaka ny tongotra, misy hozatra voafaritra tsara. Kely ny lohany, saingy matanjaka ny valanoranony. Ny maso dia lehibe, mainty jet, hazel na volontany. Ny mana sy ny rambony dia volon-doko maivana (ivoara, volafotsy na fotsy) be dia be. Ny haavony dia eo amin'ny 145 ka hatramin'ny 165 centimetatra.
30 taona eo ho eo ny androm-piainan'izy ireo.
Soavaly io tena manan-tsaina sy be fitiavana; raha ny marina dia iray amin'ireo mifamatotra indrindra amin'ny tompony izy io. Ankoatr'izay dia tsy manana toe-tsaina tia mifaninana izy fa afaka ny ho tonga namana tsara indrindra ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Azo antoka fa misy ireo manontany tena hoe inona no ilana an'io soavaly sarobidy io, marina? Tsotra ny valiny: biby fiompy foana izy io hatrizay ... ary mbola misy mandraka androany. Raha tsy manana ny toetra amam-panahy na mampiseho fahalianana amin'ny fifaninanana dia vao mainka izany a soavaly mitaingina, amin'ny rodeo na amin'ny dia lavitra efa tena mailaka izy, haingana ary mahatohitra.
Inona no maha samy hafa ny soavaly palomino sy ny perla?
Matetika ny biby roa dia mifanjevo satria samy manana ny mampiavaka azy ireo. Na izany aza, mba tsy hitranga aminao izany dia tokony ho fantatrao ny palitaon'ilay soavaly palomino dia maivana kokoa ny lokony. Ankoatr'izay, ny perla dia mety manana volom-bolo fotsy, raha ny palomino kosa dia hanana fotsy fotsy foana.
Na izany na tsy izany, satria sarina teny arivo ny sary iray, ity misy sary sy horonan-tsary:
Soavaly palomino volamena
Ahoana ny hevitrao momba ilay soavaly palomino?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Soavaly Palomino